आकाशसँग छुट्टिएपछि पुष्पसँग जम्ला त पूजाको जोडी ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / आकाशसँग छुट्टिएपछि पुष्पसँग जम्ला त पूजाको जोडी ?
आकाशसँग छुट्टिएपछि पुष्पसँग जम्ला त पूजाको जोडी ?
नायिका पुजा शर्मा र नायक पुष्प खड्काको पहिलो सहकार्य रहेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘सरर’ बोलको दशैँ तिहार गीतमा गायिका रानी शाक्यले स्वर भरेकी छिन् । राजेश शाक्यको शब्द रहेको गीतमा कल्याण सिंहको संगीत छ । भिडियोमा पुजा र पुष्पले अभिनय गरेका छन् । ज्ञानेन्द्र शर्माको छायांकन, विजयराज भुर्तेलको सम्पादन रहेको गीतमा देव धिमालको निर्देशन छ ।
नायिका पूजा शर्मा र नायक पुष्प खड्काले चलचित्र ‘अझै पनि’मा एकसाथ काम गरेका थिए तर यो चलचित्रमा एकसाथ काम गरेपनि यी दुइले पर्दामा रो मान्स भने गरेका थिएनन् । यो चलचित्रमा एकसाथ काम गरेपछि पूजा र पुष्पले चलचित्रमा सहकार्य गरेका छैनन् । यतिमात्र होइन, यी दुई म्युजिक भिडियोमा समेत सर्वाधिक व्यस्त हुँदा पनि एकसाथ काम गरेका छैनन् ।
गीतलाई संसारभरका विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट पनि सँगै रिलिज गरिएको छ । रानी शाक्यको पछिल्लो समयमा धेरै गीतहरू चर्चित रहेका छन्। हाल अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा रहेकी गायिका शाक्यको अहिलेसम्म ५ दर्जनभन्दा बढी गीतहरू आइसकेका छन् । त्यस्तै नायक आकाश श्रेष्ठसँग छुट्टिएपछि पुष्पसँग जम्ला त पूजाको जोडी भनेर चर्चा भने सुरू भएको छ ।